Wajiga Labaad Ee Dhismaha Wadada U dhaxaysa Hobyo iyo Gaalkacyo Oo Heer gabogabo ah Maraya
Professor Cabduqaadir Maxamed Shirwac oo kamida gudiga gacanta ku haya dhismaha wadada isku xirta magaalooyinka Hobyo iyo Galkacyo ee Gobolka Mudug ayaa ka war bixiyay halka ay marayso dhismaha wadadaasi Isagoo oo tilmaamay in qeybtii ugu dhibka badneyd ee wadada ay ka bilaabeen taasina ay ku qaadatay waqti badan.
Prof Shirwac ayaa sheegay in dhererka wadadu uu gaarayo illaa 262 km guud ahaan islamarkaana hadda ay so gabagaynayaan 30 km ee ugu horraysay.
“Waa 60km waa inta ugu adage e ugu dhibka badan leh waa ciidda dhulkaasi ka sameysan yahay 200km ee kale waa ka duwan yahay waa ciid aad iyo aad u nugul oo u jilicsan oo aan ku qiyaasay sida sokorta oo kale markey biyaha ku dhibcaan u milmaya. Halkaasi waadi dhul ah ayaanu buuxineynay waxaad arkeysaa inaan 10meter maalin iyo labo maalin anagoo joognaa”.
Professor Shirwad ayaa isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri “ sababtoo ah ciida halkaas oo aad iyo aad u jilicsanaatay oo aan laheyn meel adag ama aan anagu adkeyno oo intaan ciidaa ka qaadno meesha carro kaawo lu shubno soo kocino oo dhulka la soo sinno”.
Professor shirwac oo wareysi siinayay Idaacada Ganacsiga ee Googjoog in wdadaas dhererkeedu uu yahay 262km isla markaana ay soo bilaabeen sanadskiii hore isla markaana ay ahadda ku rajo weyn yihiin inay soo gaba gabeeyaan 60 ki km ee ugu horeysay hadana ay soo afmeereen 30ki km ugu horeysay Professor Shirwac oo hadalkiisa sii eskamid ahaa carro kaawadii baan hadda ku wadnaa,
Professor ka ayaa sheegay inay saddex waji u qeybiyeen sameynta wadada in dhinaha laga jaro wajiga koowaada oo laga dhigo meel la mari dadka iyo duunyadaba, kadibna in carro kaawo la marsiiyo oo la adkeeyo wajiga saddxaad oo ah in laamiga la saaro
Professor Cabduqaadir Maxamed Shirwac waxa uu sheegay in lagu qiyaasay inay wadadaas ku baxeyso lacag ka badan 20milyan isla markaana ay iska kaashadeen dadka deegaanka oo isugu jira iyo kuwo ku nool gudaha iyo dibadda iyo waliba ganacsatada deegaanka oo kaalin laxaad leh ka qaadanaya dhismaha wadadaas.